Amin'ny faran'ny taona dia maro ny ankizy mandany fotoana any amin'ny toby fianarana. Mba handaminana fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny ankizy dia ilaina ny mandrindra ny fandaharam-potoana mialoha. Azonao atao ny miomana amin'ny lalao sy ny fifaninanana eo an-toerana. Ankoatr'izany, ny hetsika toy izany dia tsy fialamboly fotsiny, fa afaka manao asa fanabeazana.
Lalao intellectual / fifaninanana ho an'ireo ankizy ao an-toby
Ny fomba amam-panao dia mahomby amin'ny fampiofanana. Ny lalao samihafa dia azo ampiasaina hamerenana indray ny fitaovana, ho an'ny fampandrosoana logic, fahaiza-mamorona. Afaka manolotra fifaninanana mahaliana ianao :
Cook kely. Ny lehilahy dia tokony hizara ho ekipa roa. Ny iray dia manome ny tanjona hanamboarana lasopy, ary ny iray kosa - ny karana. Izany hoe, ny ekipa iray dia tokony hiantso legioma, voankazo hafa, izy ireo no manao izany. Ireo izay mijanona aloha dia ho very.
Teny. Io safidy io dia mety amin'ny toetr'andro, rehefa ilaina ny mandamina fialan-tsasatra ao amin'ny efitrano. Ny ankizy dia manao ravina, penina, omena teny lava izy ireo, izay ilana ny mifidy olona fohy. Iza no afaka manoratra bebe kokoa, dia nandresy izy.
Iza no mino an'izany? Ny ankizy dia zaraina amin'ny ekipa misy olona 8 ary ny tsirairay avy any aoriana dia nomena laharana 1 ka hatramin'ny 8 ao amin'ny vala. Saingy ireo mpandray anjara dia tsy mahafantatra ny isany, fa jereo fotsiny ny isa any ambadiky ny iray izay mialoha. Mila mahay mandanjalanja ianao ary mikarakara anao.
Fanatanjahantena sy fanatanjahantena ary fifaninanana ao amin'ny toby fianarana
Fantatra fa ny fampandrosoana dia tsy maintsy feno. Noho izany, afaka manolotra ankizy toy izany ianao:
Mandrosoa mankany aloha. Ny lehilahy dia tokony hizara ho ekipa. Tsy maintsy mandeha izy ireo manakaiky ny 30 m sy ny aoriana. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny mpandray anjara roa avy amin'ny ekipa dia handositra avy hatrany ary manao izany izy ireo, manosika ny lamosiny ary mifampitantana.
Hiram-pitiavana. Ny ekipa tsirairay dia tsy maintsy manomana famokarana ho an'ny hira rehetra. Avy eo dia afaka mihazona fifaninanana misy fampisehoana an-kira ianao.
Azonao atao ny mandray anjara betsaka amin'ny lalao, fanadinana sy fifaninanana ho an'ny ankizy amin'ny toeram-pilasiana an-tsekoly, ny ilainao ihany no mampiseho ny fisainana sy ny fitazonana ny taona sy ny mahaliana ny ankizy.
Iza no mitoetra ao amin'ny fisaraham-panambadiana?
Ny tahotry ny ankizy
Toby sy seza ho an'ny ankizy hatramin'ny 2 taona
Ahoana no hilalao ny kianja?
Rahoviana ilay ankizy no miteny hoe "Neny"?
Sunblock ho an'ny ankizy
Cuisener sticks and Gienesh blocks
Badyan - ampiasaina amin'ny sakafo
Courgettes - fambolena sy fiahiana eny an-kalamanjana, ny tsiambaratelon'ny fijinjana be
Fangatahana mody - Fianjeran'ny 2015
Hevitra ho an'ny foto-drafitrasa
Ny fifohana sigara eo amin'ny vatana - ny antony sy ny fitsaboana
Megan Markle sy Kate Middleton dia lasa ampahany amin'ny "sehatra ara-kolontsaina" amin'ny alalan'ny ... emoji!
Inona no dikan'ny anarana hoe fanantenana
Keratin fampiakarana ny volomaso
Diet avy Svetlana Fus
Shashlik amin'ny mayonnaise
Ahoana no hialana buckwheat mahavokatra?